Ungakuphepha njani ukuthengiswa kwexesha le-SEO?
Namhlanje, ukuba uqhuba ishishini, kufuneka ulibonise kwi-intanethi. Ngokwenza oku, unako ukutsala abaninzi abathengi abanokufumana imali kunye nemali engenayo. Kuyaqondakala ukuba uneminye imisebenzi yezoshishino ngaphandle kobuchule bokusesha injini. Ngethamsanqa, ungathemba indawo yakho kwi-SEO nabathengisi be-SEO kwaye uzinike ixesha lakho kwezinye izinto ezibalulekileyo zezoshishino apho ulungile.
Nangona kukho ezininzi iinkohliso ezihamba ngeenkonzo ze-SEO ze-hat-black-peds, amashishini amaninzi amancinci aqala ukuqaphela ukuba i-hat-white hat ukulungiselela ukulungiswa kweenjini eziyimfuneko kubalulekile - long term care insurance in california. Ngamhla, abathengisi abaninzi banikezela abathengi ngeenkonzo ze-SEO zekhwalithi kuba kunengqiqo kubo bobabini abathengi nababoneleli ngeenkonzo. Nangona ukuphuculwa kweenjini zokukhangela kuyinkalo enye yenkampu yokuthengisa ngokubanzi, kufuneka ibe sisiseko apho izicwangciso zenye iifaneli ze-intanethi kufuneka ziphunyezwe.
Ukuphuculwa kweenjini zophando yindlela yokuchitha ixesha kunye neendleko. Ngoko, kunokubakho ubulumko ukutshala imali kuyo. Ukongezelela koko, kunika iziphumo ezinokuthi zenzeke kwaye zincinci, ngoko ke akukho ziqhamo xa kuziwa ekubuyiseleni imali. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuqeshisela nabathengisi be-SEO, kufuneka ufundise indlela yokufumana umboneleli weenkonzo ze-SEO.
Izinto ofuna ukuziqwalasela ngaphambi kokuqesha umthengisi we-SEO
Umgaqo wokuqala kufuneka ukhumbule nayiphi ixesha ofuna ukuqesha i-agency ye-SEO kukuphepha iikhampani eziqinisekisa i-rankings eziphezulu kwiinjini zokukhangela. Akukho bani unokukunika iziqinisekiso. Zininzi izizathu zokuba kutheni. Okokuqala, nguGoogle kuphela owaziyo zonke iimpawu ezizodwa zeewebsite, kwaye ngamanye amaxesha i-webmasters ayinakuyichaphazela. Ngaphezu koko, ukuba isayithi lakho kwindawo ekhuphisana kakhulu, awukwazi ukufumana abakhuphiswano bakho abahlala kulo mkhakha ixesha elide.
Uyazi ibhizinisi lakho elifanelekileyo
Abathengisi bakho be-SEO abayi kukwazi ukunceda ukuba bafumana ulwazi oluncinane malunga nezoshishino lakho. Kufuneka ulungele ukuthetha nomthengisi we-intanethi malunga neempawu zakho zezoshishino ezifana nezoshishino-ezithile, abathengi njalo njalo. Ngaphezu koko, akufuneki ukuba ibhizinisi lakho lenze ntoni kwiminyaka emininzi edlulileyo kwaye uvule umxholo onjani na inkampani yakho kwaye ibaluleke kangakanani kubaphulaphuli bakho abajoliswe kuyo.
Kufuneka ukuba uqaphele ukuba ixesha ochithayo ukwenza okwenziweyo ngokwakho, imali encinane oyakufuneka uyichithe kwi-arhente ukwenza ukulungiswa kwewebhusayithi kuwe. Ii-arhente zeDivithali zinemithombo yokudala ukuvelisa umxholo wemigangatho kwiwebhsayithi kunye neeblogi, izixhobo zokuhlalutya ukulandelela nokulawula imetrikhi yeewebhusayithi kunye nezixhobo zokubeka iliso imisebenzi yeendaba zoluntu.Azikho izakhiwo ze-SEO umnini-webhsayithi ehlala ephethe. Yingakho ukutyalo ngokusesikweni kwi-SEO kunokuba luncedo kwisiza sakho. Ngaphezu koko, ukusebenzisana ne-arhente yokuthengisa yedijithali unokucwangcisa uhlahlo lwabiwo-mali njengoko luhlala lunika iifizi zenyanga ezizinzileyo zokuncedisa iinkonzo.